मान्छेको मृत्युपश्चात के हुन्छ ? गौतम बुद्धको यो रोचक प्रसङ्गबाट जान्नुस् ! – Medianp
मान्छेको मृत्युपश्चात के हुन्छ ? गौतम बुद्धको यो रोचक प्रसङ्गबाट जान्नुस् !
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २३, २०७५१५:१२0
काठमाडौ । मान्छेको मृत्युपश्चात के हुन्छ ? हामीलाई थाहा छ , मानिसहरुको मृत्युपश्चात मृत शरिर कुहिएर जान्छ । त्यसपछि जीवन सकिन्छ । तर अर्को प्रश्न उसले जीवनभरी बटुलेका दृश्य र ज्ञान के हुन्छ ? यो कुराको धर्मले हंश बनेर जान्छ भन्ने गरेका छन् । तर तथ्य कुरा धर्म र विज्ञान दुवैले पत्ता लगाउन सकेको छैन् ।
यही प्रश्न भगवान गौतम बुद्धलाई उनको शिष्यहले पनि गरेका थिए । जहाँ बुद्ध आफ्ना शिष्यहरूलाई ज्ञानको ज्योती बाँडिरहेको थिए । के भने बुद्धले हेर्नुस् यो कथाप्रसङ्ग जस्ताको तस्तै,
एकपटक गौतम बुद्धलाई उनका एक शिष्यले सोधे, “हे भगवन! हजुरले आजसम्म हामीलाई धेरै पाठहरू सिकाउनुभयो तर मानिसको मृत्युपश्चात के हुन्छ?” भनेर कहिल्यै सिकाउनु भएन् ?
शिष्यको यस्तो प्रश्न सुनेर बुद्ध मुस्कुराउदै जवाफमा उल्टो प्रतिप्रश्न सोधे“पहिला मलाई यो भन वत्स ! यदि कोहि कतै जान लागिराखेको छ र अचानक कतैबाट उसको शरीरमा एक विषले भरिएको तीर आएर लाग्यो भने सुरुमा के गछौ ? शरीरमा लागेको तीरलाई हटाएर उपचार गर्छौ कि तीर कहाँबाट कसले हान्योभनेर खोज्न जान्छौ ?
शिष्यले बुद्धको मनसाय बुझदै यस्तो जवाफ दिए , “सुरुमा त उसको शरीरबाट तीर झिकेर तुरुन्तै उपचार गरिहाल्नुपर्छ, गुरु! नत्र त्यो विष उसको पुरै शरीरमा फैलिन थाल्छ ।”
त्यसपछि बुद्ध भने “तिमीले ठीक भन्यौ वत्स! अब यो भन कि पहिला यस जीवनमा दुखको निवारण गर्ने उपाय खोज्छौँ कि, मृत्युपश्चात के हुन्छ भनेर सोच्छौ?”
बुद्धको प्रश्नबाट हामीले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौ । किनभने मानिसहरु यो संसारमा बाच्नको लागी अनेकौ सर्घषहरु गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले हामीले बाचुनजेल राम्रो काम गरौ , मरेपछि के हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्नु हुदैन् ।
‘मनिकर्निका’लाई बेवास्ता गरेको भन्दै कंगनाले लगाइन् आलियालाई यस्तो आरोप, आफ्नो फिल्म आउँदा मात्र मेसेज गर्ने
यस्तो छ साइकल चलाउनुको फाइदा, क्यान्सरबाट समेत बच्न सकिन्छ
नयाँ वर्षको पहिलो बुधबार बुध ग्रहको प्रकोप ! यी ५ कार्य गरेर पाउनुहोस् मुक्ति !
पशुपतिमा जारी महायज्ञमा रु ३० लाख र सात क्वीन्टल धातु सङ्कलन